Jilicsanaanta borotokoolka WPA2 waxay umuuqataa in lagu xayiray alaabada Apple | Waxaan ka socdaa mac
Shalay galab warka ku saabsan nuglaanta laga helay borotokoolka WPA2 ee dhammaan xiriirada WiFi ayaa gaaray shabakadda. In sidan khabiirka amniga Mathy Vanhoef, wuxuu mas'uul ka ahaa sameynta warkaan dadweynaha, oo runti saameynaya dhammaan isticmaaleyaasha.
Taasina waa inaad haysato Mac, PC, iPhone, iPad, modem, qalab Android ah, router ama qalab kale oo isticmaala borotokoolkan nabadgelyada WPA2 wuxuu u nugul yahay cilladda amniga ee la helay. Dareenkan, cadee in fashilka amni uusan aheyn mid laga naxo maadama loo baahan yahay marin u helida qalabka laga hadlayo, laakiin waa muhiim in dhibaatada la saxo waxayna u muuqataa taas Apple horay ayuu u haystay.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan haddii ay fududahay in la xalliyo dhibaatada baaxaddaas le'eg, maaddaama aysan ahayn guuldarro nidaam hawlgal oo gaar ah ama wax la mid ah, jawaabta su'aashani waa haa. Si fudud u cusbooneysiinta qalabka fog fog waa suurtagal in la xalliyo ama la daboolo godka amniga ee la soo sheegay iyo Apple horey ayey tan ugu sameysay dhamaan badeecadeeda isticmaasho borotokoolkan amniga.
Waxaan ka akhrisan karnaa AppleInsider in cayayaanka horay loogu hagaajiyay betaskii hore ee macOS, iOS, tvOS iyo watchOS, plaakiin waxba lagama sheego AirPort Extreme, AirPort Express iyo Time Machine. In ka mid ah router-yada Apple-ka waxaa jira dhibaato ah in la joojiyo sidaa darteed waa inaad ka taxaddartaa haddii Apple go'aansado dhamaadka inuu soo saaro qalab cusub oo leh shaashad dhammaantood ama in kale. Haddii ay dhacdo in aan la helin qalabka, waxba ma dhici doonaan sidoo kale, maadaama Mac, iPhone, iwm ay leeyihiin ilaalintaan, ee is deji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » U nuglaanta borotokoolka WPA2 waxay umuuqataa in lagu hagaajiyay alaabada Apple
Astaamaha ugu horreeya ee iMac Pro oo leh Intel Xeon ayaa muuqda